Izinto Okufanele Uzenze eKildare
I-Coil Kildare ingaba ngesinye sezigodi ezincane zase-Ireland kepha igcwele izinto ongazihlola nokuzithola - empeleni, kuningi ongakubona nokwenzayo okungaba nzima ukukukhama konke kube yiholide elilodwa!
IKildare yindawo yokuzalwa ka-Arthur Guinness no-Ernest Shackleton, kepha uma ubuyela emuva, uKildare wayehlala eSt Brigid, omunye wabangcwele abathathu base-Ireland. ICill Dara, okusho ukuthi "isonto lom-oki", igama lesi-Irish elithi Kildare, kanye negama lesigodlo esasungulwa iSt Brigid, esaba isikhungo esibalulekile sobuKrestu bokuqala e-Ireland.
Ngalesi silinganiso somlando, sesimanje nesasendulo, akumangazi ukuthi umlando namagugu kukuzungezile nomaphi lapho uya khona e-Co Kildare - inhliziyo yaseMpumalanga Yasendulo yase-Ireland.
Izindlu & Izingadi
Imvelo & Izilwane zasendle
Izinto Eziphezulu Ezizokwenziwa Nezingane Kuleli hlobo
Izifundo ezihamba phambili zeGalofu zaseKildare
IKildare - Isifunda Esiphelele
Isinyathelo Sokubuyela Esikhathini NeMnyuziyamu Yezithonjana
Izindaba ezivela ku-Waterways: I-Athy Boat Tours
Umzila omkhulu kunayo yonke kaLeinster uthango oluhehayo olutholakala ngaphandle nje kokuchuma emaphandleni aseNyakatho Kildare.
Ukuhlanganiswa okuyingqayizivele kwamagugu, ukuhamba ngezinkuni, ukuhlukahluka kwezinto eziphilayo, ama-peatlands, izingadi ezinhle, ukuhamba ngezitimela, ipulazi lezilwane, idolobhana lezinganekwane nokuningi.
Le ndawo eyingqayizivele inikeza iphakethe eliphelele labathandi begeyimu yokulwa ngemisebenzi ethokozisayo ye-adrenalin.
I-Working stud farm esekhaya lezingadi ezidumile zaseJapan, iSt Fiachra's Garden kanye neLiving Legends.
IClonfert Pet Farm
Usuku olujabulisayo olugcwaliselwe imindeni olunemisebenzi ehlukahlukene ehlanganisa ukuvakasha okuqondisiwe kanye nobumnandi bokulima obenziwa ngezandla.
Umholi wase-Ireland ophishekela imisebenzi yangaphandle yezwe, enikela ngeClay Pigeon Shooting, i-Air Rifle Range, Archery kanye ne-Equestrian Center.
Thatha umkhumbi ophumuzayo emaphandleni aseKildare esikebheni somsele wendabuko bese uthola izindaba zemigwaqo yamanzi.